Ingrid Wikholm on sparktur were ohere inye ya ibe HSK / HBU si ude mkpa.
Nguzo na smearing igwe na ladle Holm mkpakọrịta gị nkwa! A na-ekpo ọkụ welcome onyinye. Top ke nkwa gbọmgbọm na chọọchị ma ọ bụ nwere ya ekemende n'ụlọ. OBS! Anyị na-anabata merụrụ ahụ na dị Mkpọ!
HBU na Holm Sports Club awade niile nke Holm na Sundsvall region akwado mkpakọrịta na ha ochie Mkpọ na PITA karama. Ọ dị nnọọ ka na, eme na gburugburu ebe obibi a amara mgbe na-enye a obere onyinye! Ị na-ezere lugging ibé obodo na-eche ihu obon igwe ụfọdụ småkronor. N'ihi anyị, Otú ọ dị, na-eme ka ya n'adịghị ọtụtụ enyemaka ọ bụla! Ude Slanten kenyere chara 50/50 n'etiti HSK na HBU.
Single ma ọ bụ akpa nke Pita, nkwụnye ego Mkpọ na iko karama.
Tinye särkild green nkwa mkpa na-esote n'efu sorting na Holm chọọchị. Gbọmgbọm empties mgbe ahụ anyị mgbe nile.
Ahịhịa akpa na nkwa (Lé ota PITA / burk / nkwụnye ego iko kwa nchupu!).
Kpọkọtanụ ụfọdụ sacks na ka anyị mara mgbe ị chọrọ ka tufuo ha – 0730-332944.
– Alt. 1 Ahapụ ha na Holm na Sundsvall, SMS:ederede / oku na-aga n'ihi na ihe Ama banyere ebe.
– Alt. 2 Ina ha weere ebe i Holmberg / LIDEN- / Kovland- / Sundsvall ebe. SMS:ederede / oku na-aga ma na-ekwu otú ọtụtụ sacks, na ebe i bi / na-arụ ọrụ anyị ga-eme ndị ọzọ!
Chọrọ inyere anyị na-anakọta nkwa ma ọ bụ ị na-na-nana n'ebe ndị ọzọ na Sweden? Ọ bụrụ na ị bụ ezigbo “pantad” na nwere obere extra “obodo spirit” na-eche free iji nyere anyị aka na-anakọta nkwa gị ebe, n'ebe ọ bụla ị na-ebi. Anyị kwadebe unu pụrụ iche aka na akpa na ị nanị ahapụ a dobe-apụ saịtị gị nso (ị na-agaghị na-eguzo na nkwa otu na a!).
Echefu Norwegian ochie nkwa ígwè ọrụ ma na-akwado Holm obodo Enoch Holms SK…